Bolt Oo Hal Arin Oo Cajiib Ah Kusoo Koobay Fariga Messi-Ronaldo U Dhaxeeya & Midka Fiican %
Ma ahan wax qarsoon in Oradyahanka reer Jamaica ee Usain Bolt uu doonayo inuu noqdo ciyaaryahan kubada cagta, isagoona habeenkii xalay ahaa kasoo muuqday kulan sadaqo uruurin ahaa, kaasoo lagu dheelayay Garoon Salax ah.
Isagoo kulankaas kadib uwaramay warbaahinta ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in inkastoo uu taageero weyn uyahay Cristiano Ronaldo, hadana uu ka jecel yahay Lionel Messi, oo udheela kooxda kubada cagta Barcelona.
Hadaba, Bolt oo sharaxa sababta uu Lionel Messi, ku doortay ayaa wuxuu carabka ku dhuftay in Leo uu yahay mid udhashay kubadda cagta islamarkaana uu leeyahay tayo sare.
“Waxaan dhihi lahaa [si aan uqeexo Messi] maxaa yeelay wuxuu Messi yahay mid tayo sare leh,” ayuu yiri, Usain Bolt.
“Laga soo bilaabo sanado badan oo uu bartay, Cristiano Ronaldo wuxuu ku gaaray meesha uu hadda joogo shaqo adag, halka aan aniga udhashay xawaaraha aana uhelo tayadda badan.
Sikastaba, tani ayaa waxay ka dhigan tahay in Usain Bolt uu ku tilmaamay kabtanka xulka qaranka kubada cagta Argentina ee Leo Messi mid udhashay kubada cagta oo aan baran, laakiin Ronaldo uu yahay mid bartay oo hadana ku darsaday shaqo adag.
Hadii Argentina Ay Koobka Aduunka Ugu Cad-cad Dahay & Moradona Oo 2 Arin Oo Cajiib Ah Kula Taliyay Messi